Barnaamijyada iyo Adeegyada Hibada & Kartida leh - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Himilada waxbarashada hibada & hibada leh waa isku-darka adeegyada gaarka ah iyo bixinta barnaamijyo waxbaris kaladuwan si ardayda aqoonta leh iyo kuwa hibada leh ay u gaaraan awooddooda buuxda. Awoodda hibo iyo / ama hibada ayaa ka jirta dhammaan dadweynaha iyo dhammaan heerarka dhaqaale.
Ardayda hibada leh waxay muujiyaan awoodo horumarsan oo gaar ah oo ay ku xalliyaan dhibaatada, iskudarka aqoonta iyo heerarka sare ee kala duwanaanta, muhimka, caqliga, iyo fikirka aan la taaban karin. Barteyaashani waxay awood uleeyihiin inay waxqabad sare saaraan howlaha sababaynta marka lala barbardhigo kuwa kale ee isku da'da, khibrada iyo deegaanka ah.
Ardayda aqoonta leh waxay muujiyaan guul gaar ah iyo / ama karti hal ama in kabadan aagag tacliimeed, hal-abuurnimo iyo farshaxan muuqaal iyo waxqabad leh. Gaaritaanka gaar ahaaneed waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, ka shaqeynta si ka baxsan heerka darajada iyo lahaanshaha iyo / ama ku dabaqida aqoonta qaabab wax beddelaya, oo isku dhafan.
Barnaamijkeenna iyo nashqadeynta adeeggayagu wuxuu ku saleysan yahay moodeelka 'All-Some-En-model' ee hoose ka muuqda.
CogAt (Imtixaanka Awooda Aqoonta)
Barnaamijka Aqoonyahannada Da 'yarta ah waa barnaamij tacliimeed oo qaata dhaqamada ku saleysan cilmi-baarista ee lagu aqoonsanayo laguna kobcinayo kartida tacliimeed ee ardayda taariikh ahaan ku liidata adeegyada hibada leh iyo barnaamijyada horumarsan. Barnaamijka waxaa asal ahaan loo qaabeeyey oo laga hirgeliyey Dugsiyada Dadweynaha ee Degmada Fairfax (VA) sanadkii 2002. Aqoonyahanada Da'da yar waa mid ka mid ah sideed barnaamij oo qaranku aqoonsan yahay oo muujiya caddayn cad oo si guul leh loogu taageerayo ardayda kala duwan ee kartida sare leh.
Ardayda waxaa loo tixgeliyaa barnaamijka Aqoonyahannada Da'da yar iyadoo lagu saleynayo baahidooda:
Helitaanka ilaha iyo khibradaha kobciya awooddooda sare
Xaqiijinta kartidooda si ay u horumariyaan isku-kalsoonidooda iyo u-nuglaantooda waxbarasho
U-doodid si loo hubiyo in la aqoonsan yahay kartidooda lana sii horumariyo
Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka Aqoonyahannada Da 'yarta ah wuxuu bartilmaameedsanayaa ardayda kooxo gaar ah oo gaar ah sababtoo ah wakiillada taariikhiga ah ee ka hooseeya adeegyada Awoodda Sare, Hibada & Kartida (GT) iyo barnaamijyada koorsada horumarsan.
Waa maxay ujeedooyinka Barnaamijka Aqoonyahannada Da'da yar?
Himilada muddada-dheer ee Aqoonyahannada Da 'yarta ah waa in laga helo ardayda leh karti tacliimeed sare oo ka timaadda dadka taariikh ahaan aan la soo koobi karin markay yar yihiin, si kor loogu qaado himilooyinkooda shaqsiyeed, in la taageero ka-qaybgalka qoyska, iyo in ardayda loo diyaariyo shaqada adag ee adag ee rasmiga ah. Barnaamijyada Suurtagalka ah ee fasalada dambe.
Sidee ardayda loogu xushaa Aqoonyahanada Da'da yar?
Khabiirro Aqoonyahanno Dhallinyaro ah oo Dugsi Hoose dhigta ayaa galaya fasallada Kindergarten-ka illaa iyo Fasalka 2-aad inta lagu gudajiro saddexda sano ee ugu horreysa sannad-dugsiyeedka, waxayna bartaan casharo loogu talagalay inay gacan ka geystaan kobcinta xirfadaha fikirka halista ah iyo hal-abuurka. Inta lagu jiro casharradan, macallinka fasalka wuxuu u dhaqmaa sidii kormeere oo, isagoo adeegsanaya aalad u kuurgelid si gaar ah loogu talagalay, wuxuu diiwaangeliyaa ficillada / fikirka ardayda inta lagu jiro casharrada.
Iyada oo ku saleysan indha indheynta fasalka, shaybaarada shaqada, iyo buundooyinka imtixaanka, ardayda waxaa loo doortaa ka mid noqoshada barnaamijka Aqoonyahanada Da'da yar. Waalidiinta waxaa lagu wargelinayaa warqad ku darista ardaygooda barnaamijka. Ardayda ayaa loo qiimeyn doonaa barnaamijka sanad walba.
Maxay yihiin adeegyada ay helaan Ardayda Aqoonyahannada Da'da yar?
Markii la aqoonsado, ardaydu waxay la shaqeeyaan khabiirrada Aqoonyahannada Dhallinyarada ah koox yar oo joogto ah. Casharrada la baray waxay ardayda siinayaan fursado fikir iyo hal abuur leh oo su'aalo, sahamin, iyo baaris ah. Waxqabadyada waxbarashadu waxay sidoo kale ku xiran yihiin asalka ardayda kala duwan iyo sidoo kale waxyaabaha lagu barto fasalka caadiga ah.
Dugsiyada Robbinsdale Area waxay u adeegsadaan Shaashadda 'CogAT Screener' hal dhibic oo xog ah si loo aqoonsado ardayda u baahan kara adeegyada ay bixiso Waaxda Hibada iyo Kartida.
Foomka 7 ee CogAT wuxuu qiimeynayaa heerka iyo qaabka awoodaha fikirka hadalka, tirade iyo baaxada (aan hadalka lahayn) ee ardayda laga bilaabo xanaanada ilaa fasalka 12aad. . CogAT waxay bixisaa sawir dhameystiran oo ku saabsan awoodaha ardayda ee guud ahaan qaybaha tacliinta. Waxay soo qaban doontaa macluumaad muhiim ah oo aan ku matalin buundooyinka la soo sheegay ama cabbirada kale ee guusha dugsiga.
Bishii Sebtember, ardayda fasalka 3aad waxaa lagu imtixaamaa fasalkooda iyadoo la isticmaalayo Imtixaanka Awooda Aqoonta (CogAT). Dhammaan ardayda dhigata fasallada afraad iyo shanaad ee degmada ku cusub ayaa sidoo kale lagu tijaabin doonaa iyadoo la isticmaalayo CogAT. Natiijooyinka imtixaannadani waa qayb ka mid ah shuruudaha aqoonsiga si loogu meeleeyo ardayda barnaamijkeenna FOCUS. Dhibcaha FAST iyo dhibcaha MCA sidoo kale waxaa loo isticmaalaa meelaynta Diirada.
Aqoonsiga Ardayda 2-aad
Dhammaan ardayda dhigata Fasalka 2-aad waxaa la imtixaami doonaa bisha Febraayo iyaga oo isticmaalaya CogAT. Tani waa mid ka mid ah tallaabooyinka loo adeegsado aqoonsiga ardayda inay u adeegaan Waaxda Waxbarashada Hibada & Kartida. Marka lagu daro CogAT, FAST iyo dhibcaha imtixaanka MCA waxaa loo isticmaalaa habka aqoonsiga hibada.
Guddiga La-talinta ee GT, Febraayo 2021
Febraayo 23 2021
Guddiga latalinta ee GT waxay ka wada hadleen cusbooneysiinta, iskuulka xagaaga ee Galbeedka xaafadaha, oo ay weheliso hore u eegida.
Guddiga La-talinta ee GT, Noofambar 2020
Nofeembar 19 2020
Guddiga latalinta ee GT ayaa ka wada hadlay cusbooneysiinta, dib u habeynta iyo turxaan bixinta, oo ay weheliso howlgalka barnaamijka.
Oktoobar 2020 Cusboonaysiinta Dugsiga Dhexe
Oktoobar 14 2020
Akhriso oo waxbadan ka baro Genius House - oo ah baaritaan ku saleysan, qaab dhismeed mashruuc ku saleysan oo loogu talagalay in lagu farxo oo laga qeybgaliyo barashada ardayda.
Oktoobar 2020 Cusbooneysiinta Dugsiga Hoose GT
Oktoobar 2 2020
Markaan horay u socono sanad dugsiyeedka 2020-2021, waxaan dooneynay inaan idinla wadaagno cusbooneysiin ku saabsan fursada kobcinta oo loo heli doono dhamaan ardayda fasalka 3-5aad laga bilaabo Isniinta, Oktoobar 5.